Daafaca kooxda Liverpool Virgil van Dijk oo ka hadlay kulanka habeen dambe ee Manchester derby – Gool FM
Daafaca kooxda Liverpool Virgil van Dijk oo ka hadlay kulanka habeen dambe ee Manchester derby
(England) 23 Abriil 2019. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa sheegay in Manchester United ay waajib ku tahay inay ka guuleysato Manchester City kulanka baaqiga u ahaa ay ku wada ciyaarayaan horyaalka Premier League.
Wargeyska “Manchester Evening News” ayaa wuxuu daabacay wareysi uu dhawaan Virgil van Dijk kaga hadlay kulanka la wada sugayo ee Manchester derby waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Ma ahan wax sahlan in Everton lagu garaaco garoonkeeda, balse 4-0 ayaa ah guuldaro aad u weyn, Manchester United waa inay nafteeda u adeegto”.
“Wax saameyn ah naguma yeelan doonto arintaas, Balse United-ka waxay wali dagaal ugu jirtaa inay u soo baxdo tartanka Champions League xili ciyaareedka soo socda, si taasi ay gaarto waxay u baahan tahay in natiijo fiican ay ka helaan kooxda Manchester City”.
Si kastaba Liverpool ayaa hogaanka horyaalka Premier League ku heysa 88 dhibcood kaddib 35 kulan oo ay ciyaareen, halka Manchester City ay kaalinta labaad ugu jirto 86 dhibcood kaddib 34 kulan ay soo ciyaartay.
Yeelkadeeda, Manchester City ayaa habeen dambe ee Arbacada kula ciyaari doonta kulankii baaqiga u ahaa kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Manchester United garoonka Old Trafford.
HORDHAC : Deportivo Alaves VS Barcelona? Xidigaha maqan, xogta kulanka iyo safafka macquulka ah ka hor kulanka.
Valverde oo si RASMI ah u magacaabay liiska ciyaartoyda Barcelona ee kulanka caawa kooxda Deportivo Alaves